ရုတ်ခြည်းဖြစ်ခြင်း (ဝါ) တစ်ဆင့်ချင်း | ZAYYA
← နှလုံးမှသာ ဖြတ်စီး၍
အထတော ဃူမက္ကရ ဂျိဂယာဆာ :ပါရဂူ →
ရုတ်ခြည်းဖြစ်ခြင်း (ဝါ) တစ်ဆင့်ချင်း
အသိဥာဏ်ပညာ နဲ့ အသိဥာဏ် အလင်း ဟာ တစ်ဖြေးဖြေး ချင်း ၊ တစ်ဆင့်ချင်း ဖြစ်တာ လား။ ဒါမှ မဟုတ် – ဆာတိုရီ လို ရုတ်ခြည်း ဖြစ်တတ် တာ မျိုးလား။
အသိဥာဏ် အလင်းဟာ သီးခြား ထပ်ဖြစ်လာတဲ့ အရာတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ အခြားက ဘယ်တော့မှ မလာဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ရုတ်ခြည်း ဖြစ်တာလည်း မဟုတ်သလို၊ တဆင့်ဆင့် မြင့်တက် လာတယ် ဆိုတဲ့ ဖြစ်စဉ်မျိုး လည်း မဟုတ်ဘူး။ အသိဥာဏ် အလင်း (ဝါ) နားလည် သဘော ပေါက်မှု ဟာ ခင်ဗျား ဆီမှာ တည်ရှိပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျား ရဲ့ အခု အချိန် ၊ အခု နေရာ မှာပဲ ရှိတယ်။ အနာဂတ် တစ်ချိန်ချိန် အတွင်း သီးခြား ဖြစ်မယ့် အရာ တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။
မျိုးစေ့ တစ်စေ့မှာ အပင်ဖြစ်ပွားဖို့ သတ္တိ သယ်ဆောင် ထားသလို၊ အမိဝမ်းမှာ သားငယ် ရှိနေ၊ မွေးဖွားဖို့ ရှိနေသလိုမျိုး ခင်ဗျားလည်း သူ့ကို ခင်ဗျား သန္တာန်ထဲ သယ်ဆောင် ထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အသိဥာဏ် အလင်း ကို ခင်ဗျား အပြင် သယ်ထုတ် နိုင်တယ်။ အဲ့အတွက် ကတော့ ခင်ဗျား အပေါ်မှာသာ မူတည် ပါတယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ အစွမ်း သတ္တိ ပြင်းပြအား အပြည့်အဝ ရှိမလား။ ဒါဆို ချက်ချင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ခင်ဗျား အစွမ်း မပြည့်ဝ သေးဘူးလား – ဒါဆို ပြည့်ဝသည် အထိ တဆင့်ဆင့် ဖြစ်ရ ပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့ကြောင့် ပြောလေ့ ရှိတဲ့ စကားက –
Understanding never comes to you- you are understanding.
Enlightenment is not something that happens to you – you are enlightenment.
နားလည်သဘော ပေါက်မှုဟာ သီးခြား ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ဘူး ။ ခင်ဗျား ကိုယ်တိုင်က နားလည်သဘောပေါက်မှု ဖြစ်တယ်။
အသိဥာဏ် အလင်း ဟာ သီးခြား ဖြစ်တဲ့ ပြင်ပ အရာ မဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျား ကိုယ်တိုင်က အသိဥာဏ် အလင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အမှတ်ရ နေဖို့က ခင်ဗျားရဲ့ ရွေးချယ်မှု တစ်ခုတည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ အသိဥာဏ် အလင်းကို ခင်ဗျား ကိုယ်တိုင် စိတ် ဆန္ဒ အပြည့်အဝ လိုလားပါသလား၊ အလိုဆန္ဒ ပြင်းပြ သလား။ ဘယ်လောက်ထိ ပြင်းပြ လဲ ဆိုရင် နောက်ဆုံး အဲ့ဒီ အလိုဆန္ဒ ကိုယ်တိုင် လောင်ကျွမ်းပြာကျ သွားတဲ့အထိ ရှိမလား။ ဒါဆို ခင်ဗျား အခုချက်ချင်း ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါ ခင်ဗျားနဲ့သာ ဆိုင်တယ် ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့လို့ ပြောရပါလိမ့်မယ် ။ တစ်ဆင့်ချင်း – ချက်ချင်း ဆိုတာတွေဟာ အသိဥာဏ် အလင်း နဲ့ မဆိုင်ဘူး။ အသိဥာဏ် အလင်းက ခင်ဗျားဆီ ရုတ်ခြည်း ဖြစ်တာလည်း မဟုတ်ဘူး – တဖြေးဖြေးချင်း ဖြစ်လာတာ လည်း မဟုတ်ဘူး။
ဒါ့ကြောင့် အဲ့ဒီ ကိစ္စကို – ဒီ ဥာဏ်အလင်းအပေါ် လွှဲမ ချပါနဲ့။ ကြာတတ်တဲ့ သဘာဝလား၊ ချက်ချင်း ဖြစ်သလား ဆိုတာ ခင်ဗျားနဲ့ပဲ ဆိုင်ကြောင်း ကောင်းကောင်း သိထား စေချင်ပါတယ်။ ဒီလို ဖြေးဖြေးလား – မြန်မြန်လား ဆိုတဲ့ အမေး ပြဿနာတွေ ကြောင့်သာ ဒဿန၊ ဝါဒ၊ ဂိုဏ်းဂဏတွေ ပေါ်ပေါက် ရတော့ တယ်။ ဂျပန်မှာ ဇင် ဂိုဏ်း နှစ်ဂိုဏ်း ကွဲပါတယ်။ တစ်ဂိုဏ်း က ရုတ်ခြည်း ဥာဏ် အလင်း ရမှု ကို လက်ခံပြီး၊ တစ်ဂိုဏ်း က တစ်ဆင့်ချင်း တက်လှမ်းသွားရမယ် ဆိုတဲ့ ဥာဏ်စဉ် အပေါ် လက်ခံ တယ်။ ဆိုလိုတာက – ဒီ “ရုတ်ခြည်း” တို့ ၊ “တဆင့်ချင်း” တို့ ဆိုတာတွေကပဲ “ဥာဏ်အလင်း” ရဲ့ အရည် အသွေးတွေ ဖြစ်နေ သလိုလို လက်ခံ ထားကြ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စင်စစ် ဒီ အရာတွေက အသိဥာဏ် အလင်းနဲ့ ဘာမှ မသက်ဆိုင်ဘူးပဲ။ သိမြင်ခြင်း အကြောင်းဟာ ခင်ဗျား သန္တာန်မှာ တည်ရှိပြီးသား ဖြစ်တယ်။ ခင်ဗျား အခုလုပ်မလား -မလုပ်ဘူးလား ဆိုတာက ခင်ဗျားနဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်။ ဘယ်အကြောင်းမှ သူနဲ့ မဆိုင်ဘူး ရယ်။ ဒါ ကို ဗုဒ္ဓဘာသာ မှာ အနုဿယ လို့ ဆို မယ် ထင်ပါတယ်။ ရင့်ကျက်မှု ၊ ဣနြေ္ဒ အနုအရင့် လို့ ခွဲခြား ပြောတတ် ပေမယ့် ဒီ “ရင့်ကျက်မှု” ဆိုတဲ့ စကားကို သုံးရမှာ ခက်ပါတယ်။ ကနေ့ခေတ် အမြင်နဲ့ ရင့်ကျက်မှု ကို နားလည်မှု လွဲနိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥာဏ်အလင်း (ဝါ) နားလည်မှု အမြင် ရှိဖို့မှာ – ခင်ဗျား စိတ် သန္တာန် အဆင်သင့် ဖြစ်နေတာ ကိုသာ ဆိုလိုပါတယ်။ အဲ့ဒါပဲ လိုအပ်တယ်။ ဒီလို အဆင်သင့် ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ – ခင်ဗျား သန္တာန် ဟာ ရှင်းလင်းနေမယ်- အပြည့်အဝ ရိုးသားနေမှာပဲ ။ ဒါဆို ရင် အဲ့ ဥာဏ်အလင်း၊ အမြင်အသိ ရှိလာချိန် ဟာ အခုချက်ချင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခဏလေးမှ လစ်ဟာ နေမှာ မဟုတ်ဘူးပဲ။ ခင်ဗျား သန္တာန်ထဲ ရိုးသား စွာ နဲ့ ဝင်ရောက် သွားဖို့ တစ်ခုတည်း။ ဒါကို မမြင်၊ မတွေ့ ၊ မလုပ်နိုင်ရင်တော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့် အောင် တဖြေးဖြေးလည်း ခင်ဗျား စောင့်ပေ ဦးတော့ပဲ။
April 4th 2012 at 1:48 PM
Filed under Osho Tagged with အိုရှိုး, enlightenment, Osho